Qarixii Soobe 14 bishii octoobar 2017 - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Qarixii Soobe 14 bishii octoobar 2017
Qarixii Soobe 14 bishii octoobar 2017
Wuxuu ahaa qarax xoogan oo shacabka Soomaaliyeed qaluubtooda ku reebay murugo ,xasuus aan la iloobi karin.Hooyooyin iyo aabayaal soomaaliyeed ay ku wayeen u badkoodii quruxda badannaa korintoodii ay ka soo mareen xalado kala duwan ayaa halkaas uu ku soo idlaaday mustaqbalkoodii.
Ubixiii dalka u soo kacaayey qaarkood ayaa lagu wayey naftoodii kuwo kalana
Waxaa ay ku wayeen Lixadkoodii. Qaraxii ugu saameynta badannaa oo soomaaliya ka dhaca ayuu ahaa. Manta waxay ku beegan tahay maalintii uu qaraxaasi dhacay oo ahayd 14 bishii octoobar 2017.
Waxay ahayd wakhti salaada casar lagu jirey waxaa uu ku habsadey qaraxaasi isgeyska Soobe ee magaalada Muqdisho Waxa uuna galaftay nolosha dad aan waxba galabsan. Tirada dadka ku dhitay Waxaa lagu qiyasaa 500 oo ruux. Dhaawacana waxaa lagu qiyasaa ku dhawaad 950 qof.
Halka walli aan la ogeyn tirada saxda ah ee uu qaraxaas geystay waxkastay ahayd sida dhibasho, dhaawac iyo burbur. Hantiyeed. Balse waxaa jira dad badan oo khasaaro maal iyo nafba uu ka soo gaadhay. Dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in qaraxaasi uu ahaa kii ugu khasaraha badannaa ee abid ka dhaca soomaaliya.
W/Q Abdirahman Ahmed Jaamac
Previous articleMuxuu Farmaajo ka yidhi hadalkii Donald Trump ee ahaa inuu kala baxayo Ciidamada ka jooga Somalia!
Next articleBanaanbax maanta ka socda Muqdisho